संविधानलाई व्यवहारमा लागु गर्ने कसरतमा छौं : मुख्यमन्त्री राई - Arunkhabar.com
प्रकाशित : ३ आश्विन २०७६, शुक्रबार १३:३७
विराटनगर, ३ असोज । प्रदेश नं. १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले संविधानलाई व्यवहारमा लागु गर्ने कसरतमा प्रदेश सरकार रहेको बताउनु भएको छ ।
संविधान स्वत : आँफै कार्यन्वयन नहुने भएकाले नीति, नियम, योजना, पद्धती र संस्कारको माध्यमबाट कार्यन्वयन हुने बताउनु भएको छ । संविधान दिवसको अवसरमा आज विराटनगरमा आयोजित कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री राईले सो कुरा बताउनु भएको हो । स्वच्छ, सुखी र समुन्नत प्रदेशको मूल दृष्टिकोण सहित पहिलो आवधिक योजनाको थालनी गरिएको मुख्यमन्त्री राईले बताउनुभयो ।
प्रदेशको मुलभुत सवालहरुमा राजनीतिकदलहरुवीच एकता कायम गर्ने असल संस्कारको विकास भएको उहाँको भनाई छ । दुईवटा संविधानसभाबाट टुंगिन नसकेको प्रदेश राजधानी तोक्ने विषयमा सर्वसम्मत निर्णयलाई सशक्त तथ्य र उदाहरणको रुपमा लिने सकिने मुख्यमन्त्री राईले बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘प्रदेशमा प्रतिनिधित्व गर्ने सवै राजनीतिक दलको सहमतिमा प्रदेशको नामाकंन पनि छिट्टै टुंगिनेछ ।’ संविधान प्रदत्त मौलिक हकलाई व्यवहारमा लागु गर्ने दायित्व र प्रतिबद्धतालाई उच्च महत्व दिएको उहाँले बताउनुभयो । शासन सञ्चालनमा कुनै समस्या र द्विविधा वा विवाद नरहेको मुख्यमन्त्री राईले स्पष्ट पार्नुभयो ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय गानका रचयिता व्याकुल माईला, २४ पटक सगरमाथा आरोहण गर्ने कामिरिता शेर्पा र अल्ट्राम्याराथुन धावक मीरा राईलाई सम्मानित गरिएको छ । तीनजनालाई प्रदेश प्रमुख प्रा.डा. गोविन्दबहादुर तुम्वाहाङले सम्मानित गर्नु भएको थियो । सम्मानित तीनै जनालाई ५/५ लाख नगद प्रदान गरिएको छ । यस्तै कार्यक्रममा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्ने पोखरिया माविका विद्यार्थीलाई नगद ३० हजार प्रदान गरिएको छ । पोखरिया प्रथम भएको थियो ।
प्रर्दशनमा सत्यनारायण मावि दोश्रो हुँदै २० हजार प्राप्त गरेको छ । नेपाल स्काउट तेश्रो भएको थियो भने सैनिक आवासिय मावि धरान र नेपाल पुलिस क्लवका विद्यार्थीले सान्तवना स्थान हासिल गरेका छन् । तृतियलाई नगद १० हजार सान्तवनालाई ५/५ हजार प्रदान गरिएको थियो । कार्यक्रममा उत्कृष्ट झाँकी प्रदर्शन गर्नेहरुलाई पुरस्कृत गरिएको छ ।
उत्कृष्ट झाँकीमा किराँत राई यायोख्खा प्रथम भएको छ । बातर सरदार समाज दोश्रो, मुडियारी मुन्डा समाज तेश्रो र राजबंशी उत्थान समिति र विराटनगरका नेवार समुदायको झाँकीले सान्तवना स्थान हाँसिल गरेका थिए ।
प्रथम हुने झाँकीलाई ३० हजार, द्धितियलाई २० हजार, तृतियलाई १० हजार र सान्तवनालाई ५/५ हजार प्रदान गरिएको थियो । यसैवीच संविधान दिवसको अवसरमा प्रदेश १ का विभिन्न २५ स्थानमा स्थायी रुपमा राष्ट्रिय झण्डा राखिएको छ ।
विराटनगर विमानस्थल र महेन्द्र चौकमा मुख्यमन्त्री शेरधन राई र विराटनगर रानीमा सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरेले झण्डोलोत्तलन गर्नु भएको थियो ।
नारी विकास संघद्धारा हाईजिन किट वितरण
दर्पण नेशनल स्कुलमा कान शिविर
आज माघे संक्रान्ति हर्षाेल्लासका साथ मनाईदै
विराटनगर, २५ वैशाख । मोरङको बेलबारी नगरपालिका–७ मा हत्या गरेर फ्यालेको अवस्थामा आज बिहान एक...